हजुरको गर्ल्डफेण्डले हजुरलाइनै सबैभन्दा बढी माया गर्छिन त ? | नेपालको सम्झना
Browse » Home » रोचक जानकारी » हजुरको गर्ल्डफेण्डले हजुरलाइनै सबैभन्दा बढी माया गर्छिन त ?
हजुरको गर्ल्डफेण्डले हजुरलाइनै सबैभन्दा बढी माया गर्छिन त ?
गर्लफ्रेन्डका लागि तडि्पने युवाहरुका लागि दुःखद समाचार आएको छ। आजभोलि अधिकांश युवतीहरुले ब्वाँईफ्रेन्ड भन्दा पनि आफ्नो मोबाइललाई बढी माया गरेको देखिएको छ। अस्ट्रेलियामा गरिएको एक सर्वेक्षणमा ४००० सुन्दरीलाई सामेल गएको थियो। उक्त सर्वेक्षणमा प्रत्येक दश महिला मध्ये चार महिलाले पुरुष बिना जिन्दगी बिताउन सक्ने तर मोबाइल बिना एकपल पनि जिउन नसक्ने बताएका थिए ।
द डेली टेलिग्रफका रिपौर्टरका अनुसार उक्त सर्वेक्षणमा महिलाले सबैभन्दा बढी माया आफ्नी आमालाई त्यसपछि आपनो तस्वीरलाई अनि मोबाइललाई तथा अन्तिममा मात्र आफ्नो ब्वाँईफ्रेन्डलाई माया गर्ने गरेको बताइएको छ।त्यसैले सजक रहनुहोस् कहि कतै तपाइको गर्लफ्रेन्डले पनि यस्तै त सोच्दिनन् ? बेलैमा होशपुर्याउनुहोला ।
Posted by नेपालको सम्झना at 12:41 AM
0 comments to “हजुरको गर्ल्डफेण्डले हजुरलाइनै सबैभन्दा बढी माया गर्छिन त ?”